Faafaahin laga helaayo Qarax Ka Dhacay Gobalka Shabeelaha Hoose | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Faafaahin laga helaayo Qarax Ka Dhacay Gobalka Shabeelaha Hoose
Faah faahino dheeraad ah ayaa waxaa ay kasoo baxayaan qaraxyo geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ay Maanta ka dhaceen duleedka degaanka Leego ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Qaraxyadaan oo ahaa miinaca nooca dhulka lagu Aaso ah ayaa waxaa la sheegay in lala eegtay Gaadiid ay wateen Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo kuwo Mareykan ah oo ku wajahnaa degaanka leego.
Dadka degaanka ayaa waxaa ay Warbaahinta u sheegeen inay maqlayeen dhawa jugta qaraxyada iyo rasaas xoogan oo ka dambeyay,hayeeshee aysan cadeyn karin khasaaraha ka dhashay maadaama Goobta aan loo dhawan karin.
Al-Shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyada qaraxyadaas,waxaana baraha internet-ka ee taageera lagu daabacay inay qaraxyadaasi la beegsadeen Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ee sida gaarka ah u tababaran ee Bangaraafta iyo kuwa Mareykan ah,isla markaana ay khasaaro ku gaarsiiyeen.
Saraakiisha Ciidamada Dowladda Soomaaliya ee Gobolka Shabeellaha Hoose weli kama hadlin qaraxyadaas,Wararkii ugu dambeeyay ee na soo gaaraya ay sheegayaan in xaalada ay degan tahay,isla markaana Ciidamada Dowladda iyo kuwa Mareykanka ay socdaalkooda iska sii wateen.
Faafaahin laga helaayo Qarax Ka Dhacay Gobalka Shabeelaha Hoose was last modified: June 17th, 2020 by Admin
Dowladda Somalia oo markale dib u dhigtay furitaanka duulimaadyada
Maxay ka wada hadleen Guddoomiye Cabdi Xaashi & Madaxweyne Deni? (Sawirro)
Martinez oo noqday tababaraha Belgium
Dhageyso:-Jaaliyada Iskoodlanda ayaa waxa ay ka hadleen arimaha ay kutaageeraayaan Maamulka KGS ayaguu Fariin cad Udirey Gulaha Badbaadada KGS